राष्ट्रपति गेटमा बिरोधका रोचक दृश्यः पुरूष उचालेर हटाउँदा ३ महिला प्रदर्शनकारी भए भारी (भिडियो), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
राष्ट्रपति गेटमा बिरोधका रोचक दृश्यः पुरूष उचालेर हटाउँदा ३ महिला प्रदर्शनकारी भए भारी (भिडियो)
काठमाडौं। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास अगाडि युवाहरूले गरेको विरोध प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप भएको छ।
निर्मला पन्तको न्यायका लागि दवाव दिन युवाहरू ब्यानरसहित नाराबाजीमा उत्रिएका थिए। राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि प्रदर्शन भैरहँदा त्यहाँ उपस्थित प्रहरीले हस्तक्षेप गरेनन्। तर उनीहरूले थप बल मगाएपछि १० मिनेटमा आएको प्रहरी टोलीले प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्यो।
सडकमै सुतेका प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले उचालेर सडक किनारातर्फ लगेको थियो। पछि उनीहरूलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ।
प्रदर्शनकारी महिलाहरू भने नाराबाजीमा डटिरहे। किनकी उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन त्यहाँ महिला प्रहरी थिएनन्। थप बलमा आएको टोलीमा पनि महिला प्रहरी नभएपछि उनीहरूलाई उठाउन निकै समय लाग्यो।
राष्ट्रपति कार्यालयको द्वारमा लगातार नाराबाजी चलिरहेको दृश्य कैद गर्न प्रहरीले पत्रकारलाई रोक्ने प्रयास गर्यो। तीनजना प्रदर्शनकारी प्रहरीका लागि भारी पर्यो। क्यामेराबाट उनीहरूलाई छेक्न प्रहरीले भरमग्दुर प्रयास गर्यो।
राष्ट्रपति कार्यालय अगाडिको प्रदर्शन, प्रहरीले गरेको बल प्रयोग र महिला प्रहरी नहुँदा तीन महिला प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति कार्यालयकै गेटमा लामो समयसम्म चर्काएको नाराबाजी हेर्नेका लागि पनि निकै रोचक बन्यो।
हेर्नुस् डिसी नेपालका लागि अमृत पौडेलले तयार पारेको यो स्थलगत भिडियो समग्रीः